Dangers Of Convenience Food, Fast Food and Junk Food - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” အလှယျစား၊အမွနျစား၊အသငျ့စားတို့နှငျ့ ကနျြးမာရေးအန်တရာယျမြား “
ခေါငျးစဉျကိုကွညျ့ပွီး ဘာအကွောငျးပါလိမျ့လို့ ခေါငျးစားနပွေီလား?
အလှယျစားဆိုတာက ဆိုငျကဝယျပွီး အိမျမှာလှယျလှယျကူကူပဲ ပွနျနှေး၊ပွနျခကျြစားရုံအစားအစာတှကေိုပွောတာပါ။
ဥပမာပွောရရငျ ခေါကျဆှဲပွုတျ၊ငါးသတ်ေတာ၊ကွကျအူခြောငျး၊ ဝကျပေါငျခွောကျ စတာမြိုးတှပေေါ့။
အင်ျဂလိပျလိုတော့ Convenience Food လို့ချေါပါတယျ။
အမွနျစားဆိုလို့ အမွနျဝါးပွီးအမွနျမြိုခရြမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူးနျော။
အမွနျစားဆိုတာက ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျပွငျဆငျစရာမလိုဘဲ ဆိုငျကနေ မိနဈပိုငျးအတှငျးပွငျဆငျပေးပွီး ခကျြခငျြးစားနိုငျတဲ့ အစားအစာမြိုးကိုဆိုလိုပါတယျ။
ဥပမာ – ဟမျဘာဂါ၊ကွကျကွျော၊အာလူးခြောငျးကွျော၊ပီဇာ စသဖွငျ့ပေါ့။
မိနဈပိုငျးအတှငျး အမွနျရတာမို့ Fast Food လို့ချေါပါတယျ။
အသငျ့စားဆိုတာကတော့ ခုဝယျ ခုစားလို့ရတဲ့ အသငျ့စားအစားအစာ တှပေါ။ကယျလိုရီနဲ့အဆီမြားစှာပါဝငျပွီး ကိုယျခန်ဓာအတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ အမြှငျဓာတျ၊ဗီတာမငျနဲ့သတ်တုဓာတျတှေ ပါဝငျမှုအလှနျနညျးတဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ မသငျ့တျောတဲ့အစားအစာတှပေါ။
ဥပမာအားဖွငျ့ လဖေောငျးမုနျ့တှေ၊အာလူးကွျောတှေ စတာတှေ ပါဝငျပါတယျ။ Junk food လို့ချေါပါတယျ။
အထကျပါအစားအစာတှဟော တဈခါတလစေားရငျ ပွသနာမရှိပမေယျ့ ရရှေညျစားမယျဆိုရငျတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆိုးကြိုးတှဖွေဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
အသငျ့စားအစားအစာတှဟော ကယျလိုရီနဲ့ကိုယျခန်ဓာအတှကျ ကောငျးကြိုးမပေးတဲ့ ပွညျ့ဝဆီမြားစှာပါဝငျပွီး….ကိုယျခန်ဓာအတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ အမြှငျဓာတျ၊ဗီတာမငျနဲ့သတ်တုဓာတျမြား မပါသလောကျနညျးပါးပါတယျ။အသငျ့စား အစားအစာ Junk Food တှကေို မကွာခဏ (သို့) ရရှေညျစားသုံးမယျဆိုရငျ အဝလှနျခွငျးနှငျ့ အဝလှနျခွငျးရဲ့ ဆကျစပျရောဂါတှဖွေဈတဲ့ ဆီးခြို၊နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနဲ့ အခွားနာတာရှညျရောဂါမြား ဖွဈပှားနိုငျသညျ့ အန်တရာယျ မွငျ့မားလာမှာဖွဈပါတယျ။
အအေး၊အခြိုရညျနဲ့ အခြိုဓာတျပါဝငျမှုမြားတဲ့ Junk Foodတှဟော ဆီးခြိုရောဂါဖွဈစဖေို့ လှုံ့ဆျောမှုတဈရပျပဲဖွဈပါတယျ။
Junk food တှရေဲ့ နောကျထပျအန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့ အခကျြ တဈခကျြကတော့လဆားဓာတျပါဝငျမှုမြားခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အကြိုးဆကျအားဖွငျ့ သှေးတိုးနှငျ့နှလုံးရောဂါ…ထိုမှတဈဆငျ့ ကြောကျကပျရောဂါမြား အဆငျ့ဆငျ့ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
အထကျမှာပွောခဲ့သလိုပဲ….junk food တှဟော ကယျလိုရီနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျအကြိုးမပွုတဲ့ပွညျ့ဝဆီတှသော အမြားဆုံးပါဝငျပွီး ဗီတာမငျနဲ့သတ်တုဓာတျတှေ မပါသလောကျနညျးပါးတာမို့ junk food တှကေိုရရှေညျစားသုံးတာနဲ့အမြှ ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့အာဟာရတှမေရရှိဘဲ အာဟာရခြို့တဲ့တဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေို ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။
အသငျ့စားအစားအစာတှရေရှေညျ စားသုံးသူမြားဟာ လတျဆတျပွီးအာဟာရပွညျ့မှီတဲ့ အစားအစာတှစေားသုံးနတေဲ့သူတှနေဲ့ယှဉျရငျ ရှငျလနျးတကျကွှမှုမရှိတော့ဘဲ စိတျဓာတျကမြှုမြားနဲ့ပိုမိုကွုံတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။
” အလွယ်စား၊အမြန်စား၊အသင့်စားတို့နှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ “
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ဘာအကြောင်းပါလိမ့်လို့ ခေါင်းစားနေပြီလား?
အလွယ်စားဆိုတာက ဆိုင်ကဝယ်ပြီး အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပြန်နွှေး၊ပြန်ချက်စားရုံအစားအစာတွေကိုပြောတာပါ။
ဥပမာပြောရရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ငါးသေတ္တာ၊ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်ပေါင်ခြောက် စတာမျိုးတွေပေါ့။
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Convenience Food လို့ခေါ်ပါတယ်။
အမြန်စားဆိုလို့ အမြန်ဝါးပြီးအမြန်မျိုချရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူးနော်။
အမြန်စားဆိုတာက ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ ဆိုင်ကနေ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြင်ဆင်ပေးပြီး ချက်ချင်းစားနိုင်တဲ့ အစားအစာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။
ဥပမာ – ဟမ်ဘာဂါ၊ကြက်ကြော်၊အာလူးချောင်းကြော်၊ပီဇာ စသဖြင့်ပေါ့။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အမြန်ရတာမို့ Fast Food လို့ခေါ်ပါတယ်။
အသင့်စားဆိုတာကတော့ ခုဝယ် ခုစားလို့ရတဲ့ အသင့်စားအစားအစာ တွေပါ။ကယ်လိုရီနဲ့အဆီများစွာပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်မှုအလွန်နည်းတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်တဲ့အစားအစာတွေပါ။
ဥပမာအားဖြင့် လေဖောင်းမုန့်တွေ၊အာလူးကြော်တွေ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Junk food လို့ခေါ်ပါတယ်။
အထက်ပါအစားအစာတွေဟာ တစ်ခါတလေစားရင် ပြသနာမရှိပေမယ့် ရေရှည်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသင့်စားအစားအစာတွေဟာ ကယ်လိုရီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ ပြည့်ဝဆီများစွာပါဝင်ပြီး….ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များ မပါသလောက်နည်းပါးပါတယ်။အသင့်စား အစားအစာ Junk Food တွေကို မကြာခဏ (သို့) ရေရှည်စားသုံးမယ်ဆိုရင် အဝလွန်ခြင်းနှင့် အဝလွန်ခြင်းရဲ့ ဆက်စပ်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးချို၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနဲ့ အခြားနာတာရှည်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အအေး၊အချိုရည်နဲ့ အချိုဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ Junk Foodတွေဟာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်စေဖို့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Junk food တွေရဲ့ နောက်ထပ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက် တစ်ချက်ကတော့လဆားဓာတ်ပါဝင်မှုများခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ…ထိုမှတစ်ဆင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ….junk food တွေဟာ ကယ်လိုရီနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ပြည့်ဝဆီတွေသာ အများဆုံးပါဝင်ပြီး ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ မပါသလောက်နည်းပါးတာမို့ junk food တွေကိုရေရှည်စားသုံးတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေမရရှိဘဲ အာဟာရချို့တဲ့တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသင့်စားအစားအစာတွေရေရှည် စားသုံးသူများဟာ လတ်ဆတ်ပြီးအာဟာရပြည့်မှီတဲ့ အစားအစာတွေစားသုံးနေတဲ့သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ရွှင်လန်းတက်ကြွမှုမရှိတော့ဘဲ စိတ်ဓာတ်ကျမှုများနဲ့ပိုမိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။